Warmly Welcome: ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းဖန်တီးခြင်း
အခမဲ့ဝက်ဘ် space ပေးထားသော ၀န်ဆောင်မှုများ၏ အဓိကပြဿနာမှာ မနှစ်မြို့ဖွယ်၊ ရှည်လျားသော လိပ်စာကို ရရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ သူဇာ ဆိုသူက myisp.com တွင် အခမဲ့ဝက်ဘ် space ရယူပါက သူမ၏ လိပ်စာမှာ http://webspace.myisp.com/thu_zar3 ကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေမည်။ သူမအတွက်ကတော့ www.thuzar.com ကဲ့သို့ ရိုးစင်းပြီး တိုက်ရိုက်ကျသော လိပ်စာများက ပိုမိုအဆင်ပြေမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ thuzar.com နာမည်အတိအကျကို အခြား တစ်ယောက်က လက်ဦးပြီး ဖြစ်ပါက .com အစား .net, .info စသည် တို့ကို စမ်းကြည့်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မူလပိုင်ရှင်ထံမှ ပြန်လည် လွဲပြောင်းဝယ်ယူရန် ကြိုးစားခြင်း စသည် တို့ကို ပြုလုပ်ရတော့သည်။ မိမိစိတ်ကြိုက် ဝက်ဘ်ဆိုက် လိပ်စာများကို domain registry များတွင် အခကြေးငွေ အနည်းငယ်ဖြင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။ ထင်ရှားသော ဒိုမိန်း မှတ်ပုံတင်ဝက်ဘ်ဆိုက် များမှာ www.domaindirect.com, www.domainmonger.com နှင့် www.register.com တို့ဖြစ်ပါသည်။ ဒိုမိန်းနိမ်း မှတ်ပုံတင်ရာတွင် မိမိ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ ကတ်ကိုထည့်သွင်းလိုပါက ဥပမာ www.thuzar.com.mm မှတ်ပုံတင်ရာ ဌာနတွင် တောင်းဆို နိုင်ပါသည်။
ဒိုမိန်းနိမ်းတစ်ခု မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်စရာ option များပေးထားလေ့ ရှိပါသည်။ Name registration နှင့် web space တွဲလျက်ပါ package များကို register များက ရောင်းချလေ့ ရှိပြီး များသောအားဖြင့် ကောင်းမွန်ပြည့်စုံသော ၀န်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ကြသည်။ နောက် option တစ်မျိုးမှာ web forwarding ဖြစ်သည်။ သင်ဝယ်ယူထားသော www.thuzar.com လိပ်စာကို နဂိုရှိပြီးသား http://webspace.myisp.com/thu_zar3 သို့ ၀င်ရောက်ရာ ဂိတ်ပေါက်ဝ အဖြစ် ဆောင်ရွက်စေခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ် option တစ်မျိုးမှာ DNS server များကို သုံး၍ ဒိုမိန်းနိမ်းနှင့် မိမိစိတ်ကြိုက် ၀န်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော host service များမှ web server များကို ချိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သီးခြား web hosting ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော နှိုင်းယှဉ်စရာ အချက်အလက်များကို www.findahost.com, www.tophosts.com နှင့် www.webhostmagazine.com စသည်တို့တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ Free server (www.freeserver.com) နှင့် Virtual Avenue (www.virtualave.net) တို့ကဲ့သို့ web hosting ကို အခမဲ့ ပေးသောနေရာများ ရှိသော်လည်း ၀န်ဆောင်မှု အမြန်နှုန်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ရေရှည် အာမခံချက် ရှိမှု စသည် တို့တွင် အခကြေးငွေ ပေးရသော ကော်မာရှယ် ၀န်ဆောင်မှုများကို မယှဉ်နိုင်ချေ။ (YKM)
Labels: ကွန်ပျူတာဗဟုသုတ, အင်တာနက်
[url=http://www.louboutinmall.co.uk/]louboutin uk[/url] The front cover is Hei holding Yin, which was the Japanese promotional art that misleaded viewers intentionally, but Funimation promoted the show withalack of Hei anyway, ruining the "surprise". [url=http://www.vanesabrunosacparis.fr/]sac lune vanessa bruno[/url] Sqhrlvndt [url=http://www.oakleysunglassessforcheap.com/]oakley sunglass outlet[/url]
uqphvc 371584 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]oakley sunglass outlet[/url] 015128 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]oakley sunglass strap[/url]
[url=http://www.christianlouboutintosale.co.uk]christian louboutin[/url] Med hj av en skilsm advokat NJ, kan vem som helst l hitta kvitt din fusk och starta livet igen. [url=http://www.vanesabrunosacparis.fr/]sacs vanessa bruno soldes [/url] Godureghp [url=http://www.oakleysunglassessforcheap.com/]cheap oakley sunglass[/url]
uohylv 505570 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/[/url] 141269 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]oakley sunglass strap[/url]
[url=http://www.christianlouboutintosale.co.uk]christian louboutin uk[/url] If you feel this law needs to be the law of the land Senator Graham, then I suggest you read how to amend the Constitution and commit this law for each state to review. http://www.vanesabrunosacparis.fr Sgjghaduu [url=http://www.oakleysunglassessforcheap.com/]oakley sunglass strap[/url]
cjiglx 398640 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]oakley sunglass strap[/url] 858539 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]oakley sunglass sale[/url]
[url=http://www.christianlouboutintosale.co.uk]christian louboutin outlet uk[/url] "Oh!" Are running fake, oakley sunglasses, suddenly felt the back of the head once again sounded the sharp wind, seems to be necessary to grasp the claws down, grasping his head intoarotten watermelon. [url=http://www.vanesabrunosacparis.fr/]Sac vanessa bruno[/url] Yrvsnpugn http://www.oakleysunglassessforcheap.com
gztmfr 741011 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]cheap oakley sunglass[/url] 478571 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]oakley sunglass sale[/url]
[url=http://www.christianlouboutintosale.co.uk]http://www.christianlouboutintosale.co.uk[/url] While there, your kids can enjoy the petting zoo, frolic through the play structure called The Crooked Mile or go to Sherwood Forest's play fort and join Robin Hood's band of merry men. [url=http://www.vanesabrunosacparis.fr/]vanessa bruno athe[/url] Nleukvwrc [url=http://www.oakleysunglassessforcheap.com/]oakley sunglass sale[/url]
lblfgz 353246 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]oakley sunglass strap[/url] 197904 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]http://www.cheapsoakleysunglassess.com/[/url]
[url=http://www.christianlouboutintosale.co.uk]christian louboutin outlet[/url] Alot of times these animals are skinned alive so the fur is not damaged. [url=http://www.vanesabrunosacparis.fr/]sac lune vanessa bruno[/url] Ancjpmypt [url=http://www.oakleysunglassessforcheap.com/]cheap oakley sunglass[/url]
ecwnel 935228 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]sunglass oakley[/url] 923547 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]oakley sunglass[/url]
[url=http://www.christianlouboutintosale.co.uk]christian louboutin outlet uk[/url] all watched this principle lately on TV, as individual acts of courage turned an entire government upside down. [url=http://www.vanesabrunosacparis.fr/]boutiques vanessa bruno[/url] Bavpgycmn [url=http://www.oakleysunglassessforcheap.com/]oakley sunglass strap[/url]
bkkdal 460998 [url=http://www.oakleyssunglassessoutlet.com/]oakley sunglass outlet[/url] 366754 [url=http://www.cheapsoakleysunglassess.com/]http://www.cheapsoakleysunglassess.com/[/url]
အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးနေသော Web Site များ
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၅၅)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၅၄)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၅၃)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၅၂)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၅၁)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၅၀)
အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားများအကြား အွန်လိုင်းအသုံးပြ...
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၉)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၈)
ခေါင်းညိတ်လိုက်၊ ခေါင်းခါလိုက် လုပ်နေသူ
အသားစားသူ (နှင့်) အရိုးဝါးသူ
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၇)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၆)
ဘ၀သက်တမ်းကို (၁၄)နှစ်ထိ ပိုရှည်အောင် ကျန်းမာရေးနှင...
ကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံး Blog တွေထဲက မြန်မာနိုင်ငံက Blo...
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၅)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၄)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၃)
ဆူးလေဘုရားလမ်းက Bus-stop Business
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၂)
အန္တရာယ်ကင်းကင်း ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချမယ်
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄၁)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၄ဝ)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၃၉)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၃၈)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၃၇)
ကွာကွာမားမား Web ကမ္ဘာ (၃၆)